Isbarbardhigga Taariikhda Awoodeed Ee Xulalka Ingiriiska Iyo Talyaaniga | Gaaroodi News
Isbarbardhigga Taariikhda Awoodeed Ee Xulalka Ingiriiska Iyo Talyaaniga
Ingiriiska ayaa qalbijab kale oo xoogan la kulmay finalkii Euro 2020, ka dib markii ay guuldarro rigoore ah ka soo gaartay xulka Talyaaniga oo koobka Qaramada Yurub ka dejiyay magaalada Rome.
Garoonka Wembley oo ay fadhiyeen in ka badan 60,000 oo taageereyaal ah – waxa kale oo barxaddiisa iyo dariiqyada taagnaa kumannaan qof oo kale oo sugayay inta ay ciyaarta dhamaanayso, si ay ugu dabbaal-degaan haddii uu waddankooda ku guuleysto koobka, balse taa ma aysan dhicin.
Xulka Ingiriiska ayaa u arkayay sannadkan in ay tahay sannadkii ay kor u qaadi lahaayeen koobka Qaramada Yurub oo aysan waligood ku guuleysanin, laakiin waxaa niyadjabiyay wiilasha Talyaaniga oo rigoore 3-2 ku garaacay markii waqtigii caadiga ahaa la isla dhaafi waayay barbaro 1-1 ah.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa markiisii labaad ku guuleystay Koobka Euro 2020, waxayna gool ku laadyo ku garaaceen Ingiriiska oo taageereyaashiisii tobannaanka kun ahaa waxba u tari waayeen. Taageerayaasha Ingiriiska aya niyad jab ka qaaday guuldarrada
Talyaaniga ayaa ku guuleystay koobka Qaramada Yurub markii ugu horeysay tan iyo sannadkii 1968, halka England ay mar kale ku fashilantay in ay qaado koobka Qaramada Yurub iyadoo koobka kaliya ee caalami ah ee ay qaadeen uu yahay Koobka Adduunka, sannadkii 1966.
Talyaaniga ayaa koobkan hore ugu guuleystay hal mar oo kaliya, waxayna ahayd 52 sano ka hor, waxaanay guushan uga mahad-celinayeen goolhaye Donnarumma oo laba gool ku laad ka qabtay Jadon Sancho iyo Bukayo Saka, halka uu Marcus Rashford bannaanka mariyey.
Koobabka Talyaaniga ku guuleystay
Waxay guud ahaan ku guuleysteen 4 Koobka Adduunka ah iyo 28 koob oo tartanka Yurub ah. Brazil ayaa ah dalka keliya ee ka koob badan Talyaaniga.
1: Koobkii ugu horreeyay waxay ku guleysteen sannadkii 1934-tii, ka dib markii ay garaaceen Austria
2: 1938 waxay 4-2 kaga badisay Hungry
3: 1982 Waxay 3-1 ku garaaceen west Germany
4: Sannadkii 2016-dii waxay ku guuleysteen Koobka Adduunka ka dib markii ay ka badiyeen Faransiiska.
Dhanka kale waxay ku guuleystay laba koob oo Europian Championship ah. kii ugu horreeyay waxay ku guuleysatay 1968, markaas oo ay ka badisay Yugoslavia. Halka 53 sannadood ka dibna ay xalay ka badiyay Ingiriiska.
Koobabka Ingiriiska ay ku guuleysteen
Ingriiska weligii kuma uusan guuleysan koobka European Championship.
Dhanka Koobka Adduunkana waxay qaadeen halmar oo ay ka badiyeen xulkii West Germany, sannadki 1966.
Qoraalka sawirka,Markii gool ku laadkii ugu dambeeyay laga qabtay England